ဝိတ်ချနေချိန်မှာ အဖျော်ယမကာသောက်သုံးလို့ရသလား? - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ဝိတ်ချနေချိန်မှာ အဖျော်ယမကာသောက်သုံးလို့ရသလား?
“ ခင်ဗျား ဝိတ်ချနေတာနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး သောက်စားတာမျိုးကို ရပ်တန့်လိုက်စရာမလိုပါဘူး” လို့ ကိုယ်အလေးချိန် ထိမ်းသိမ်းရေး ပညာရှင် အလိုနာ ဘန်ဇနယ်လီက ပြောဖူးပါတယ်။
ယျေဘုယျအားဖြင့်တော့အလေးချိန် ထိမ်းသိမ်းရေး ပညာရှင်ဟာ အရက်သေစာနဲ့ အဖျော်ယမကာ သောက်စားတာမျိုးကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ခုပြောချင်တာကတော့ အလေးချိန်လည်းချချင်တယ်။ အဖျော်ယမကာလေးလည်း တစ်ခါတစ်ရံ မှီဝဲချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ။
တကယ်တမ်းအားဖြင့် အယ်လ်ကိုဟောမှာ ကယ်လိုရီဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီးတော့ ပရိုတိန်း၊ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ ဖိုက်ဘာဓာတ်တွေလည်း နည်းနည်းစီပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနေသူတွေအနေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ပမာဏမျိုးနဲ့ အဖျော်ယမကာသောက်သုံးတာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ ဒါကြောင့် အရက်အပါအဝင် အဖျော်ယမကာတွေကို သင့်တော်ရုံ ပမာဏမျိုး သောက်သုံးပေးခြင်းဟာ မိမိတို့ နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ဝိတ်ချနေချိန်မှာ တစ်ပတ်ကို ဘယ်လောက်ပမာဏ သောက်သုံးသင့်သလဲ?
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနေချိန်မျိုးမှာ ကယ်လိုရီသုံးစွဲမှုပမာဏကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ပတ်ကို ဝိုင်တစ်ခွက်လောက် သောက်သုံးပေးတာဟာ ဝိတ်ချနေသူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လို အနှောင့်အယှက်မှ မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ညကို ဝိုင် ၂ ခွက် ၃ ခွက်လောက် သောက်သုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကယ်လိုရီပမာဏ အများအပြားကို စုဆောင်းနေသလိုဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ ဝိတ်ချတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်နိုင်စေပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက်ကတော့ တစ်ပတ်မှာ ၁.၅ အောင်စဝန်းကျင် ပမာဏရှိတဲ့ ဝိုင် ၂ ခွက် ဒါမှမဟုတ် ၃ ခွက်လောက် သောက်သုံးပေးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်သလို ဝိတ်ချနေတာကိုလည်း ထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဘယ်လို ယမကာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်သင့်သလဲ?
ဝိတ်ချနေစဉ်ကာလတွေမှာ အဓိက ရှောင်ကျဉ်သင့်တာတွေက ဘီယာနဲ့ ကော့တေးလ်လို အဖျော်ယမကာတွေပါပဲ။ နောက်ပြီး သကြားဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ အချိုရည်တွေ၊ ဖျော်ရည်တွေဟာလည်း သင့်ရဲ့ ဝိတ်ချတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဝိတ်ချနေစဉ်ကာလမှာ ဘယ်လို အဖျော်ယမကာကို သောက်သုံးသည်ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ကယ်လိုရီပမာဏပါဝင်တယ်ဆိုတာကို အရင် သတိထားဆန်းစစ်ပြီးမှ သောက်သုံးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လူကြိုက်များတဲ့ ကော့တေးလ်တွေဟာ ပမဏခပ်သေးသေးတစ်ခွက်ကိုတောင်မှ ကယ်လိုရီ ၅၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ပါဝင်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရှရှားနဲ့ မာဂရီတာ့စ်လို ကော့တေးလ်မျိုးတွေမှာဆိုရင် သကြားအရည်နဲ့ ခရင်မ်ပမာဏ အများအပြားပါဝင်နေတတ်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီလို ကော့တေးလ်မျိုးတွေမှာ အယ်လ်ကိုဟောပမာဏလည်း အများအပြားပါဝင်နေပြီး ကယ်လိုရီလည်း ပုံမှန်ထက်ပိုများတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် ထိမ်းသိမ်းရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အကြံပေးချက်တွေအရဆိုရင်တော့ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်တဲ့ အဖျော်ယမကာတွေ သောက်သုံးရာမှာ အကြိမ်ရေနဲ့ ပမာဏကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ချိန်ညှိသောက်သုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုထားကြပါတယ်။
ကယ်လိုရီပမာဏများပြားတဲ့ အဖျော်ယမကာမျိုးကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လောက် သောက်သုံးဖြစ်တာက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်စေမှာမဟုတ်သလို အဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုလည်းဖြစ်စရာမလိုအပ်ဘူးလို့ ကိုယ်အလေးချိန် ထိမ်းသိမ်းရေး ပညာရှင် အလိုနာ ဘန်ဇနယ်လီက ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစကားပုံလေးလည်း ရှိတယ်လေ။ “တန်ဆေး လွန်ဘေး” လို့ ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား။ ဘယ်အရာမဆို လွန်လွန်ကျူးကျူး မဖြစ်အောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြုမူကြရင် အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဝိတ်ချနေစဉ်မှာ အဓိက သောက်သုံးသင့်တဲ့ အရည်များ – ရေ၊ ပဲနို့၊ လက်ဖက်စိမ်း၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ဘလက်ကော်ဖီ
ဝိတ်ချနေစဉ်မှာ မသောက်သုံးသင့်တဲ့ အရည်များ – အသင့်ဖျော် ကော်ဖီမစ်ထုတ်များ၊ ဆိုဒါ၊ ကော့တေးလ်၊ မော့ခ်တေးလ်
ဝိတ်ချနေစဉ်မှာ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း သောက်သုံးသင့်တဲ့ အရည်များ – Kombucha ၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ ခွန်အားဖြည့်အချိုရည်များ၊ သီးစုံအချိုရည်များ၊ Smoothies
ကလေး ရေချိုးဆပ်ပြာများ နှင့် ဓာတုအန္တရာယ်
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇန်နဝါရီ 13, 2020 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 20, 2020